कोभिड-19 को दौरानमा जमघटहरू सुरक्षित राख्ने मार्गदर्शक | Washington State Coronavirus Response (COVID-19)
कोभिड-19 को दौरानमा जमघटहरू सुरक्षित राख्ने मार्गदर्शक
खोप लगाएको होस् वा नलगाएको होस्, यदि तपाईं यस जाडो मौसममा साथीहरू र परिवारसँग भेला हुने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं आफू र आफ्नो प्रियजनहरूलाई कोभिड-19 विरुद्ध सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेबारे सोच्नुहोस्।
खोप लगाउनु भनेको आफूलाई र आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई, विशेषगरी अझैसम्म पनि खोप लगाउन योग्य नभएका मानिसहरूलाई बचाउने सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो। खोपहरू गम्भीर बिमारी र मृत्युलाई रोकथाम गर्नका लागि उच्च रूपमा प्रभावकारी छन् तर यदि तपाईंले भेला हुने निर्णय गर्नुहुन्छ भने चाहे खोप लगाएको होस् वा नलगाएको होस्, कोभिड-19 को संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ। यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने खोप, मास्कहरू, हात धुने र घरमा बस्ने यी सबै तपाईं अन्य मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्न सक्ने चरणहरू हुन्।
सामान्यमा, अहिले सार्वजनिक रूपमा भेला हुँदै हुनुहुन्छ भने:
खोप लगाउने भनेको कोभिड-19 को कारण आफूलाई गम्भीर बिरामी, अस्पताल भर्ना वा मृत्यु हुनबाट बचाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।
मास्क लगाउनुहोस्। खोप लगाएको वा नलगाएको, पाँच वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले सबै भित्री सार्वजनिक स्थानहरूमा र 500 वा सोभन्दा बढी मानिसहरू भएका कन्सर्टहरू वा खेलकूद कार्यक्रमहरू जस्ता बाहिरी कार्यक्रमहरूमा फेस कभरिङ लगाउन आवश्यक छ। हामीले2र4वर्ष उमेर बीचका बालबालिकाले पनि मास्क लगाउनुपर्छ भनी दृढतापूर्वक सिफारिस गर्दछौं।
यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ वा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएको छ भने घरमा बस्नुहोस्।
पछिको योजना बनाउनुहोस्। तपाईंले आफूलाई मास्क नलगाएका मानिसहरूको भिडभाड हुने बार जस्ता असुरक्षित वा असुविधाजनक स्थानमा पाउने अवस्थामा पाएमा आफै ड्राइभ गर्नुहोस् वा घर जानका लागि वैकल्पिक तरिका अपनाउनुहोस्।
आफ्नो स्मार्टफोनमा WA Notify थप्नुहोस्। यदि तपाईं कोभिड-19 को सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने यसले तपाईंलाई सतर्क गराउने छ र तपाईंको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएमा अन्यलाई नामरहित रूपमा सतर्क गराउने छ। WA Notify पूर्ण रूपमा गोप्य छ र तपाईं को हो र तपाईं कहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन।
तपाईंले सामजिक भेला आयोजन गर्नु अघि
आफ्नो पाहुना सूचीको समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईं कसलाई निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ विचार गर्नुहोस्। खोप लगाउनका लागि अझै पनि योग्य नभएका साना बालबालिका लगायत कोभिड-19 को उच्च जोखिममा हुन सक्ने मानिसहरू छन्? तपाईंका पाहुनाहरूले खोप लगाएका छन् वा छैनन् भन्नेबारे तपाईंलाई थाहा छ? यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, सोध्न महत्त्वपूर्ण छ त्यसै तपाईं सोअनुसार योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
पछिको योजना बनाउनुहोस्। खोप नलगाएका धेरै मानिसहरू छन् वा कुनै पनि परिवारहरूमा गम्भीर कोभिड-19 रोगको उच्च-जोखिममा भएका खोप नलगाएका मानिसहरू छन् भने, सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प भनेको भर्चुअल रूपमा भेला हुनु हो। यदि तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा भेला हुने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, एकसाथ समय बिताउँदा तपाईंले कसरी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुहने छ भन्नेबारे साथीहरू र परिवारसँग वास्तवमै स्पष्ट हुनुहोस्।
सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्नुहोस्। यदि तपाईंले परिवार वा साथीहरूसँग भेला हुने यात्रा गर्न योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया CDC को यात्रा मार्गनिर्देशनको पालना गर्नुहोस्। यदि तपाईं उच्च कोभिड-19 प्रसारण भएको क्षेत्रमा यात्रा गर्दैँ हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोस्, तपाईं मास्क लगाएर सार्वजनिक स्थानमा अन्यबाट6फिट (2 मिटर) टाढा रहँदा थप सतर्क हुन चाहनुहुन्छ।
बाहिर लैजानुहोस्। घर बाहिरका जमघट घरभित्रका जमघटहरूभन्दा सुरक्षित हुन्छन्। यदि तपाईं घरभित्र हुनै पर्छ भने, खुला झ्यालहरू भएको कोठा जस्तो राम्रोसँग हावा खेल्ने ठाउँ छनोट गर्नुहोस्।
यसलाई सानो बनाउनुहोस्। आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरका मानिसहरूसँग भेला हुँदा जति सानो हुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ।
यसलाई छोटा राख्नुहोस्। छोटो समयावधिमा कोभिड-19 फैलन सम्भावना कम हुन्छ। छोटो जमघटहरूले पनि हात र सतहहरूलाई सही तरिकाले स्वच्छ राख्न सहज बनाउँछ।
बालबालिकाहरूको विचार गर्नुहोस्। बच्चाहरूलाई छ फिट टाढा बस्न कठिनाइ हुन सक्छ, त्यसैले मास्क लगाउन र हातहरू धुन महत्त्वपूर्ण छ। सम्झनुहोस्:2वर्ष मुनिका बच्चाहरूले कहिल्यै पनि मास्क लगाउन हुँदैन! यदि तपाईंको परिवारको सदस्य2भन्दा कम वर्षको हुनुहुन्छ वा मास्क लगाउन सक्नुहुन्न भने, खोप नलगाएका वा खोपको स्थिति अज्ञात भएका मानिसहरूसँगको भेटहरू सीमित पार्नुहोस्।
स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। विगत2हप्तामा कसैलाई खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने वा श्वास फेर्न अप्ठेरो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएको छ भने सोध्नुहोस्। पाहुनाहरूलाई आइपुग्नुभन्दा अगाडि आफ्नो तापमान जाँच गर्न अनुरोध गर्नुहोस्। ज्वरो आएको—वा अन्य लक्षणहरू देखिएका वा आफू विगत दुई हप्ता भित्र कोभिड-19 भएको कोही व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको थाहा भएका कुनै पनि व्यक्ति—घरमा बस्नुपर्छ।
परीक्षण गराउनुहोस्। खोप लगाएको होस् वा नलगाएको होस्, तपाईं जमघट हुनभन्दा 72 घण्टा अगाडि परीक्षण गराएर संक्रमणको जोखिमलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। घरमा गरिने परीक्षणहरू कार्यक्रमको दिनमा पूरा गर्न सकिन्छ। नेगेटिभ परीक्षण भएपनि, यस पृष्ठमा साझा गरिएका अन्य सुरक्षा सावधानीहरू अपनाउन अझै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
निजी जमघटको दौरानमा
मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरका मानिसहरूसँग भित्री जमघट गर्दै हुनुहुन्छ भने, अत्याधिक उपस्थितिहरूले पूर्ण रूपमा खोप नलगाउँदासम्म सबैजनालाई फेस कभरिङहरू (अनुहार छोप्ने कपडाहरू) लगाउन सिफारिस गरिन्छ। मानिसहरूले बिर्सन्छन् भने हातमा अतिरिक्त मानिसहरू लिनुहोस्।
हात धुनुहोस्। सिङ्कमा पहुँच छैन भने, ह्याण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनुहोस्।
दुरी हेर्नुहोस् र नजिकबाट सम्पर्क सीमित पार्नुहोस्। सम्भव भएसम्म, विशेषगरी गम्भीर कोभिड-19 को उच्च जोखिममा भएका वा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खोप नलगाएका मानिसहरू बीच,6फिट टाढा रहनुहोस्।
झ्यालहरू खोल्नुहोस्। उचित भेन्टिलेसनका लागि अनुमति दिन मानिसहरू भेला हुने कोठाहरूको झ्यालहरू खुला राख्नुहोस्।
सफा गर्नुहोस्। जमघट अघि, जमघटको अवधिमा र जमघटपछि बारम्बार प्रयोग गरिने सतहहरूलाई कीटाणुरहित बनाउनुहोस्।
हातहरू धुनुहोस् (फेरि)। साबुन र पानीले 20 सेकेन्डसम्म धुनुहोस्।
सेनिटाइज गर्नुहोस्। पाहुनाहरूद्वारा छोइएको हुन सक्ने टेबलटप, काउन्टरहरू, ढोकाका चुक्कल र बाथरूम फिक्सरहरू जस्ता सबै सतहहरूलाई सुरुमा साबुन र पानीले सफा गर्नुहोस् र त्यसपछि कीटाणुरहित बनाउनुहोस्।
लक्षणहरू छन् वा छैनन् भनी हेर्नुहोस्। तपाईंमा कुनै पनि लक्षणहरू देखिएमा, परीक्षण गराउनुहोस्। उपस्थितिमा कुनै पनि व्यक्ति बीच पोजिटिभ परीक्षण भएमा भेलामा अन्यलाई सतर्क गराउनुहोस्। तपाईं अनावृत हुनुभयो भने के गर्ने भन्ने बारेमा थप जान्नुहोस्।